साताको एजेन्डा : बजेटबारे डा. रामशरण महत - ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई झुक्याउन सजिलो छैन - Ratopati
पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत आर्थिक मामिलामा अनुभवी मानिन्छन् । वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले बजेट तयारी गरिरहँदा उनको पार्टी प्रतिपक्षमा छ । १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा थुप्रै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम समेटिने अनुमान छ । महत भने सस्ता र लोकप्रिय कार्यक्रमले जनता झुक्याउन नहुने तर्क राख्छन् । यही विषयमा डा. महतसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बजेटले ध्यान दिनुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र
अहिले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको छ । वृद्धिदर १ प्रतिशत पनि छैन । ‘इकोनोमिक स्ट्याग्निसन’ छ । आर्थिक स्थिति पोहोर जस्तो अवस्थामा थियो, करिब–करिब त्यस्तै अवस्थामा छ । १ प्रतिशत पनि वृद्धि भएन भने त करिब पोहोर सालकै अवस्थामा छ भन्ने बुझिन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भएको छैन । कृषि क्षेत्रमा पनि मौसम प्रतिकूल भएकाले हामी पछाडि छौँ । पर्यटन खस्केको छ । आर्थिक क्रियाकलाप खासगरी निर्माणका काम अघि बढेका छैनन् । आर्थिक वृद्धिदर अति कम छ । योसँगै पुँजीगत खर्च पनि कम छ ।
यसैले प्राकृतिक रूपमै अहिलेको स्थिति आउने कुनै पनि आर्थिक दस्तावेज, नीति÷बजेटले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनर्ताजगी गर्ने, आर्थिक वृद्धि बढाउने, नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नेतिर बजेट लक्षित हुनुपर्छ ।
बजेट भनेको वार्षिक दस्तावेज हो । देशको अर्थ व्यवस्थाको स्थिति हेरेर आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने, त्यसको वृद्धिदर उच्च बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ बजेट ।
यो सरकारमा प्रशासकीय क्षमता अभाव छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विकास खर्च गर्ने क्षमता अभाव छ । सरकारले त्यो क्षमता वृद्धि गर्दै कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेखालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
जहाँसम्म प्राथमिकताका कुरा छन्, ऊर्जाको क्षेत्रमा १२÷१४ घन्टाको लोडसेडिङ छ । यो अति नै लज्जास्पद कुरा हो । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने । सिथिल भएका विकास निर्माणका कामलाई कसरी तीव्रता दिने । मुल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्ने । विशाल व्यापार घाटा छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने । र, समग्र वित्तीय सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने क्षेत्र प्राथमिकतासाथ ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारको ‘पपुलिस्ट’ बजेट
यो सरकारले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । र, त्यसले प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई चुनौती खडा हुने भनी व्याख्या गरिएको छ ।
यथार्थमा त्यस्तो होइन । त्यसले चुनौती हामीलाई हुँदैन । हामी चाहन्छौँ, अर्थ व्यवस्थाप्रति गम्भीर बनौँ । र, अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्ने, वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सक्ने, अनावश्यक रूपमा भोलिको पुस्तालाई बोझ थप्नेखालको बजेट ल्याउनुहुँदैन ।
देशको अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्ने बजेट र आर्थिक क्रियाकलाप ल्याउनुपर्छ । आय वृद्धि गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा आय बढ्छ, राजस्व बढ्छ । राजस्व बढेपछि लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिन्छ ।
आम्दानी नबढ्ने, वितरणवादी कार्यक्रम ल्याउँछु भन्ने हो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपन हुन्छ । यो त हाम्रो चुनौती नभएर सरकारको कायरता हो ।
क्षमता वृद्धि गरी देशको दीर्घकालीन हितमा नभएर भएका कामलाई कसरी बाँड्ने भन्ने प्रवृत्ति देखियो भने राम्रो हुँदैन । त्यो त सरकारको कमजोरी हुनेछ ।
त्यस्तै चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याउने पनि हल्ला छन् । यदि त्यस्तो भयो भने जनता झुक्याउने काममात्रै हुनेछ । त्यसको यथार्थ तुरुन्तै सार्वजनिक हुनेछ । जनतालाई झुक्याउने कुरा धेरै टिक्न सक्दैन ।
पछि जनता आफैँ मूल्यांकन गर्नेछन् । ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई झुक्याउन सजिलो छैन । एउटा भनाइ छ, ‘केही समय सबैलाई मुर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सधैँका लागि सबैलाई मुर्ख बनाउन सकिँदैन । केही मान्छेलाई सधैँका लागि मुर्ख बनाउन सकिएला तर सबैलाई सधैँका लागि मुर्ख बनाउन सकिँदैन ।’ जनतासँग मूल्यांकन गर्नसक्ने क्षमता छ ।
फेरि चुनाव आउन पनि धेरै बाँकी नै छ । कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन । र बजेट पनि कस्तो आउँछ त्यो पनि थाहा छैन । सरकार निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने भन्ने एउटा राष्ट्रले दिएको गहनतम जिम्मेवारी हो ।
त्यो जिम्मेवारीलाई गम्भीर भएर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिनुपर्छ । क्षणिक लोकप्रियताका लागि, क्षणिक राजनीतिक फाइदाका लागि, क्षणिक दलगत हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो भने त्यो ठूलो जिम्मेवारीको दुरुपयोग हुनेछ
हाम्रो सरकारको पालामा
हामीले पनि लोकप्रिय कार्यक्रमको अभ्यास त गर्यौँ तर सँगसँगै हामीले आम्दानी पनि बढायौँ । कांग्रेस सरकारले पहिलोपटक ०४८ मा बजेट बनाउँदा १२ अर्बको राजस्व थियो । अहिले करिब पाँच सय अर्बको राजस्व छ । आगामी वर्षमा यो अझै बढ्नेछ ।
यत्रो वृद्धि किन गरियो । हामीले नयाँ राजस्वका नीति ल्याएका थियौँ । नयाँ कर ल्यायौँ । जुन कुरा वामपन्थी कुनै पार्टीले ल्याएन । उनीहरूले यस्तो गाह्रो काम कहिल्यै पनि गर्दैनन् । ‘भ्याटको इन्ट्रोडक्सन’ हामीले सुरु गरेका हौँ ।
भ्याट ‘पब्लिक रेभेन्यु’को अति फराकिलो स्रोत हो । अहिले ३५/३६ प्रतिशत राजस्व भ्याटबाट आउँछ । नयाँ आयकर प्रणाली मेरै कार्यकालमा आएको हो । भ्याट पनि मेरै समयमा कानुन बनेको हो । आयकरमा ९ प्रतिशत राजस्व आउँथ्यो । अहिले २७ प्रतिशत आयकरबाट आउँछ ।
यसैले हामीले आय पनि वृद्धि गरायौँ । र, आय वृद्धिको साथसाथै स्थिति सुधार भएपछि केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्यायौँ । जस्तै, विधवाभत्ता हामीले सुरु गरेका हौँ । वृद्धभत्ता उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष मैले वृद्धभत्तालाई दोब्बर बनाएँ । पाँच सयबाट एक हजार बनाएँ । तर, यसमा पनि केही सीमा छन् । यसलाई पनि सुधार गरिनुपर्छ ।
–हामीले आम्दानी पनि बढाएका थियौँ
–सस्ता कार्यक्रमले जनता झुक्याउनुहुँदैन
–हामीले जस्तो कुनै वामपन्थी सरकारले गरेन
–वितरणवादी कार्यक्रम ल्याउनु गैरजिम्मेवारी हो
–मैले त सुझाव दिएको थिएँ, दुर्भाग्यवश सुनुवाइ भएन
–केही समय सबैलाई मुर्ख बनाउन सकिएला, सधैँ सकिन्न
भत्ता पाउनु नपर्ने धेरै मान्छेले पनि पाइराखेका छन् । २५ प्रतिशत त पाउन नपर्ने मान्छेले पाइराखेका छन् । गलत मान्छेले पनि नाम लेखाइराखेका छन् । बरु पाउनुपर्ने मान्छेले नपाइराखेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यसलाई सुधार्नुपर्नेछ ।
साथै ‘टार्गेट ओरिएन्टेड’ हुनु आवश्यक छ । जो वास्तविक आवश्यकता महसुस गर्ने मानिस हुन्, उनीहरूले पाउनुपर्छ । यसरी आवश्यक भएका र नभएकाबीच अलग बनाउनुपर्छ । त्यसैले यसमा प्रशासनिक सुधार खाँचो छ ।
हामीलाई पनि आलोचना हुन थाल्यो कि वामपन्थी सरकार आउँदा यस्तो गर्यो, कांग्रेसले केही नगर्ने भनेर आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि दबाब हामीले महसुस गरेकै हौँ । साथसाथै त्यसबेलासम्म देशमा राजस्वको स्थिति पनि निकै सुधार भइसकेको थियो ।
राजस्वको स्थिति सुधार भयो, त्यससँगै लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याएका हौँ । तर, गैरजिम्मेवारी ढंगले त्यस्तो गरेका होइनौँ ।
मैले भनेजस्तो भए एक लाख घर बनिसक्थे
यसपटकको बजेटमा संरचनागत परिवर्तनको कुनै अपेक्षा गरेको छैन मैले । प्राथमिकताको कुरा गर्दा पूर्वाधार, विद्युत् क्षेत्र, यातायात, खानेपानी, पुनःनिर्माणलगायतका कुरा प्राथमिकताको क्षेत्रमात्रै हुन् ।
मूल कुरा कार्यान्वयनको पनि हो । कार्यान्वयनतिर ध्यान दिनु जरुरी । देशको दीर्घकालीन हित र अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतिर आर्थिक अनुशासन बनाउनेतिर आय उत्पादन र रोजगारीका सिर्जना वृद्धि गर्न आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । सस्ता र हल्का क्षणिक लाभका लागि जनता झुक्याउने कार्यक्रम ल्याएर कुनै अर्थ छैन ।
राम्रो काम गर्नेलाई हामीले सहयोग अवश्य गर्नेछौँ । म आफैँले पनि अहिले सरकारमा बस्नेलाई यसरी काम गर्नुहोस्, यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिने गर्छु ।
दुर्भाग्यवश मेरो कुरा सुनुवाइ भएन । मैले भनेकोजस्तो भएको भए अहिले एक लाख जति व्यक्तिगत घर बनिसक्थे । सम्झौता गराउने र अनेक तरिकाले उहाँहरूले पुनःनिर्माण गराउने भन्नुभएको छ । सम्झौता गर्न नै कति लाग्ने हो । निर्माण गर्न त झन् कति ।
मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हाम्रै समयमा तयार भइसकेका नक्सा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि उपयोग गरी सस्ता घर ग्रामीण क्षेत्रमा बन्न सक्छ भनेर । ३०/४० मोडल तयार भइसकेका थिए । ती मोडेललाई व्यापक रूपमा घर–घरमा पुर्याउने ।
यसअनुसार जसले घर निर्माण गर्छ । जो साँच्चिकै पीडित छ । प्रमाणित पीडितले यसरी घर बनाएको खण्डमा दुई लाख रकम दिन्छौँ भनेर घोषणा गरिदिएको भए अहिले मान्छेले आफैँ घर बनाइसकेका हुन्थे । सरकारको मुख ताकेर बस्ने आवश्यकता थिएन ।
बनाउँदै, पैसा माग्दै गर्न मिल्ने अवस्था हुने थियो । अहिले त उल्टै सम्झौता गरेपछि मात्रै पैसा पाइन्छ भनिदिएपछि आफैँ बनाउन सक्ने पनि चुप लागेर बसिरहेका छन् ।
सरकारले कहिले सम्झौता गरेर पैसा देला र घर बनाउँला भनेर पीडित बसिरहेका छन् । यसरी आश्रित हुने प्रवृत्ति र मनोवृत्ति सरकारले बढाइदियो । र, अहिलेसम्म भूकम्पपीडित बर्खामा पनि टहरामा बास बस्न बाध्य छन् । पालमुनिको बास । जस्तामुनिको बास हुनुपर्ने दुर्भाग्य देखिएको छ ।
यससँगै घरको निर्माण मूल्य पनि बढेको छ । पोहोर साल जति रुपैयाँमा डकर्मी, सिकर्मी पाइन्थ्यो अहिले त्यो पाइँदैन । सरकारले यहाँ गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरेको छ ।
बजेट लागु गर्न हाम्रो भुमिका
सही कार्यक्रम ल्याइयो भने हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ । अस्ति पनि मैले यस्तो गर्नुस् भनेर सुझाव दिइसकेको छु ।
निर्माणका लागि नेपाल आर्मी, प्रहरीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । मैले धेरैपटक भनिसकेको छु । उहाँहरूलाई चिन्ता नै छैन । प्रधानमन्त्रीजीले मीठो–मीठो भाषण गरेर दंग पार्नुहुन्छ । सपना बाँड्ने काममात्रै भएको छ ।
मैले आफैँ बेला–मौकामा अर्थमन्त्रीजीसँग आर्थिक विकासका विषयमा चासो राखिरहेको छु । यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छु । उहाँ तयार पनि हुनुहुन्छ । तर, व्यवहारमा उतार्नुभएको छैन ।